घर मा वित्तीय समृद्धि को लागी वास्तु सल्लाह - यथार्थ खबर
घर मा वित्तीय समृद्धि को लागी वास्तु सल्लाह
वास्तुशास्त्र वास्तुकलाको प्राचीन विज्ञान हो। जबकि हामी सबैले वास्तुशास्त्रको बारेमा सुनेका छौं तर हामी मध्ये धेरैलाई यो थाहा छैन कि वास्तवमा के हो भनेर किन थाहा छैन र किन यो महत्त्वपूर्ण छ?
वास्तुशास्त्र शाब्दिक रूपमा वास्तुकला विज्ञानमा अनुवाद गर्दछ, र यसले डिजाइन, रूपरेखा, मापन, जग्गाको तयारी, अन्तरिक्ष व्यवस्था, र स्थानिक ज्यामिति को सिद्धान्त वर्णन गर्दछ।
घर मा वित्तीय समृद्धि को लागी वास्तु सल्लाह:
धेरैले वास्तु ध्वनिलाई साँच्चिकै जटिल र पछ्याउन गाह्रो बनाउँदछन्। जबकि, यसलाई पछ्याउन वास्तवमै सजिलो र सरल छ। यहाँ केहि सरल वास्तु सल्लाहहरू छन् जुन तपाई सजीलै घरमा अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ:
घरको उर्जाका लागि मूल ढोका प्रवेशद्वार हो, यसलाई सफा राख्नुहोस् र धन आकर्षणको लागि सजाउनुहोस्। बैजनी धनको प्रतिनिधित्व गर्दछ, यसैले घरको बैजनी रंगका पर्खालहरूलाई चित्रण गर्नु फाइदाजनक हुनेछ। यदि पर्खाल मर्मत गर्न गाह्रो छ भने, तपाइँ बैजनी को भाँडामा एक विकल्पको रूपमा मनी प्लान्ट राख्न सक्नुहुन्छ। नगदी लकर वा अलमिराह जहाँ तपाईं नगद राख्नुहुन्छ घरको दक्षिण वा दक्षिण-पश्चिम पर्खालमा राख्नु पर्छ, त्यसैले यो खुल्छ। घरको उत्तर सम्म। धनको आकर्षणको लागि नगद लॉकरको अगाडि ऐनामा राख्नु अर्को तरिका हो। यसले तपाईंको पैसा दोब्बर भएको संकेत गर्छ! तपाईंको घरको उत्तर-पूर्वी भागमा पानीका शवहरू राख्नु रचनात्मक ऊर्जाको बगैंचाको प्रतीक हो।
तपाईं एक सानो फोहरा, पानी बगैचा वा केहि अन्य जल निकाय शो-पिस जस्ता एक पानी शरीर राख्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक क्षतिबाट बच्नको लागि निश्चित गर्नुहोस्, तपाईंले चुहावट नल, नल वा कुनै दोषपूर्ण प्लम्बिंग मर्मत गर्नुभयो। वास्तुमा पैसा आकर्षित गर्नका लागि अरु धेरै सरल उपाय पनि छ। घरको उत्तर पश्चिमी भागमा बर्ड फिडर राख्ने।माछाले घरको शुद्धिकरण गर्न र घरको उत्तर-पूर्वी भागमा एक्वेरियम राख्नु फाइदाजनक हुनेछ, र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले एक्वैरियम वातित र स्वच्छ राख्नुहुन्छ। एक निःशुल्क प्रवाहको प्रबन्ध गर्नुहोस्।
घरको हावाको हावा र सम्पन्नताको राम्रो प्रवाहका लागि प्रवेशद्वारहरूमा हावाको झुन्डले नगद प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्दछ। आर्थिक लाभका लागि देवी लक्ष्मीको तस्वीर वा मूर्तिलाई प्रवेशद्वारमा राख्नु फाइदाजनक हुन्छ। एउटा सामान्य वास्तु विश्वास भनेको एक बाँसुरी राख्नु हो। घरले आर्थिक समस्याहरू हटाउँदछ। यदि तपाईं आफ्नो शिक्षा वा क्यारियरको साथ समस्याहरूको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने,2बांसुरी झुण्डाउनु फाइदाजनक हुनेछ।